ट्राफिक कार्यालय अगाडी हेल्मेट बिनाको होली ! (हेर्नुहोस् भिडियो/फोटो फिचर) - Nayabulanda.com
ट्राफिक कार्यालय अगाडी हेल्मेट बिनाको होली ! (हेर्नुहोस् भिडियो/फोटो फिचर)
नयाँ बुलन्द ६ चैत्र २०७५, बुधबार १८:३२ 351 पटक हेरिएको
इलाम : इलामसहित देशभर आज फागु पूर्णिमा अर्थात् हाेलीकाे रौनक छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म यो रंगीन पर्वमा रमाइरहेका छन् ।
हाेलीमा स्वेदेशी सँगै विदेशी पिन रमाइरहेका छन् । इलाम चौकबजार लगायतकाे स्थानमा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित युवा, युवती, बालबालिका समेत रंगको पर्व धुमधामले मनाइरहेका छन् ।
तर पर्वको नाममा ट्राफिक नियम उल्लंघन भएको पाइएको छ । कतिपय युवाहरु सडकमा नाचगान गरेर सडक जाम गरिरहेका थिए भने कतिपय हेल्मेट विना मोटरसाइकलमा सवार देखिन्थ्यो । कतिपयले तीन जना समेत सवार दिखिन्थे ।
अचम्मको कुरा चाँही जिल्ला ट्राफिक कार्यालय इलाम चोकबजार अगाडि नै विना हेल्मेट र तीन जना सवार हुँदा समेत सम्बन्धित पक्ष मुकदर्शक भएर बुसेको देखिन्थ्यो । यो दृश्यले कुनै पर्वको नाममा कानुन वा नियम उल्लंघन गर्न पाइने नकरात्मक सन्देश त दिने होइन ? सोचनीय छ ।
सबै तस्वीर : राम योङहाङ
कोरोनाको कहर (गीत)
फुलदेखी मकै सम्म ५ तस्बिरहरु
उचाई , दुरी र धरातल (कविता)
विभेदको एक नाटक
जबरजस्ती करणी आरोपमा माङसेबुङका कर्मचारी पक्राउ
आइपासकाे कोभिड सहयोग इलाममा पनि
माङसेबुङमा अनलाइन कक्षा शुरु
शुक्रबार करिब ३०० नेपालीलाई स्वदेश ल्याइँदै
एकै दिन थप ३३४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि